စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၃) – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 10 November 2010 23 December 2010 Categories Reproduction, Travelogue
8 thoughts on “စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၃)”
ဗဟုသုတတွေအတွေ thank you yar ( Singlish နဲ့ပြောသွားသည်)
10 November 2010 at 2:07 pm
နောက်ထပ် ဂျာနယ်မှာ ထပ်ထွက်ပြီးမှ ဆက်ဖတ်၇မှာလား ဆရာ
အဲဂလို အကင်းပါးတာကို ချီးကျူးပါသဗျာ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ နောက်တစ်ပတ်လေးပဲ စောင့်ရမှာပါနော်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ပေါ်လို့လာပေါ့။ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အားကျလို့ပါ ခင်ဗျာ။ 😛
15 November 2010 at 1:37 pm
နောက်ထပ် ၂ ရက်ပဲ လိုတော့တာပေါ့နော် 😀
” သည်အခါ စင်္ကာပူရရဲ့ လူအများ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း သည်တိုင်းပြည်လေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနေလေတဲ့ အချက်ဖြစ်နေနိုင်လားလို့ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။”
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ..အမေရိကရဲ့ ပုံစံကိုသွားမြင်ယောင်ကြည့်ပါတယ်..အမေရိကမှာ ၈၀ခုနောက်ပိုင်း(၆၀ ၇၀ လောက်ကတော့ အဖြူအမဲပြသနာရှိနေသေးတာကိုး) ကစပြီး ပို diverse ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်..တခုအံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က migrate လုပ်လာသူတွေက ကိုယ့်ဘာသာလူမျိုးလဲမပျောက်ပဲ ဒီကSociety ထဲကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ရောနှောသွားတာပါပဲ..
England မှာလို လာတော့လာနေကြတာပဲ..ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ရပ်ကွက်လေးတွေဖြစ်လာပြီး native တွေနဲ့ခွဲခြားနေတာမျိုးတွေက တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းမယ်မထင်ပါ..
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာလဲ singapore လို america လို ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ် လောက် singapore မှာ ၃ ၄နှစ်လောက် နေခဲ့ဖူးပါတယ်..သူငယ်ချင်းတွေရှိနေတုန်းပါ..သူတို့တိုင်းပြည်ချစ်တာကိုတော့ သိပ်မသေချာပေမဲ့ အရာရာကို business အတွေးနဲ့ကြည့်လေ့ရှိတာက တော့ ကျိန်းသေပါတယ်..အများစုက အခြေအနေပေးရင် Aussie တို့ US တို့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပြောလေ့ရှိကြတာကို ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်..မှတ်မှတ်ရရ..Perth လေဆိပ်က duty free shops တွေမှာ တရုတ်ရုပ်နဲ့လူအများစုက singapore က ပါ..(သူတို့တိုင်းပြည်မှာ မလုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်) စကားပြောကြည့်တော့ သူတို့ အဲဒီ့ လွတ်လပ်မှု့မရှိတဲ့ ကျွန်းသေးသေးလေးမှာမနေချင်ဘူးတဲ့
အဲဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့လို ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေက သန်တုန်းမြန်တုန်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကို singapore က လက်ခံနေတာပဲ..ကိုယ်တိုင်းပြည်က ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့လေ..
ကျွန်တော်တိုကတိုင်းပြည်ကေ၇ခံမြေခံကောင်းရှာပေမဲ့ေ၇လောင်းပေါင်းသင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ (weeds တွေများနေတာလဲပါတာပေါ့.:-))သူများခြံထဲ ဝေဝေဆာဆာပေါက်နေတဲ့ ကိုယ့်မျိုးစေ့ ကလေးတွေကို ကြည့်တိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ..
Singlish နဲ့လား … ဒါဆိုပြောမယ် .. Thanks hor 😛
12 November 2010 at 12:09 pm
မန်းတလေးလမ်း၊ ဧရာဝတီလမ်းတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်တော့ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ရာဇဝတ်မှု အင်မတန်နည်းတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီရက်ပိုင်း ဓားခုတ်တာတွေ ခဏခဏကြားနေရတယ်။ ;(
20 June 2014 at 5:18 pm
suicide လုပ်တာလဲ စင်္ကာပေါမှာ အများဆုံးပဲထင်တယ်။ Straits Time ထဲမှာခဏခဏ ဖတ်မိသလားလို့။
Previous Previous post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၂)
Next Next post: Five Different Kinds of People